Diig Si Mucjiso Ah U Dilay Mulkiilhiisa! - Xogside-news Xogside
Home WARARKA CAALAMKA Diig Si Mucjiso Ah U Dilay Mulkiilhiisa!
Diig Si Mucjiso Ah U Dilay Mulkiilhiisa!
Isbatooraha Booliska ee deegaanka Jeevan ee koonfurta dalka Hinidya ayaa sheegay inuu ka dhacay shil uu ku dhintay nin 45 jir ahi. Booliiska ayaa cadeeyay in la doonayeen in halkaasi lagu qabto dagaalka laba Diig. Waxaana uu intasi ku daray in mid ka mid ah labada mulkiile ee labada Diig ee dagaalamaya leh uu diigiisa lugta ugu soo xidhay Mindi 3 inch ah.
Sida Booliisku cadeeyeen ninkan oo lagu magcaabi jiray, Thanjula Satish, oo da’diisuna ahayd 45 jir, ayuu weerar ku soo qaaday Diigiisu ka hor inta aan ciyaarta dagaalka labada Diig la bilaabin, waxaana uu Midida kaga dhaawacay Bawda isagoo xididka hawlabaha uu gooyay.
Madaama deegaanka lagu qabto dagaalkan khariban ay yihiin gobolada koonfurta dalka Hindiya waxa ka fogaa Isbitaalka, waxaana uu sheegay booliisku inuu ninkaasi dhintay dhiig bax awgeed, iyadoo aan weli Isbitaalka la gaadhsiin,.
Taliyaha booliiska Jeevan ayaa intaasi ku daray in booliisku ay dacwad fureen isla markaana ay raadinayaan in ka badan toban qof oo ku lug lahaa abaabulka dagaalka Diigaga. Haddii lagu helo dambiga, qabanqaabiyaasha waxa ay wajahayaan laba sano oo xadhig ah.
Dagaalku Diigaga waxa uu caan ka yahay gobolada Koonfureed sida Telangana, Tami Nadi iwm. Dawladda ayaa mamnuucday dagaalkan sanadkii 1960, laakiin haddana waxa si qarsoodi ah u sameeyay dadka Hinduuska ah, gaar ahaan maalmaha ciidahooda. Diigga ayaa isaguna goobta ka baxsaday waxaana soo qabtay Booliiska ee geeyay goob xayawaanka lagu xanaaneeyo.
Dadka u dooda xuquuqda xayawaank ayaa iyaguna muddo dheer ku baaqayay in la joojiyo dhaqanka axmaqnimada ah ee sharciyada baalmarsan. Dagaalkan ayaa ah mid ay aad u xiiseeyaan hinduuska iyagoo ay ka soo qayb galaan kumnaan qof, waxaana la sheegay in sanad kasta ay ku dhintaan boqolaal diig dagaalkan.
Previous article25 Best WordPress Podcast Themes for 2021
Next articleIsku dey Waad Guulaysane!